Baterika E-bisikileta, Batran'ny LiFePO4, Batteran'ny indostria - SOSLLI
Ny vahaolana tsara indrindra amin'ny famonoana bateria an'i Lithium sy mpanome bateria azo itokisana
Ampahany lehibe amin'ny E-bisikileta rehetra
Ny safidy tsara indrindra amin'ny endrika rehetra sy ny karazana ho anao
Ny bateria fitahirizana angovo ISO9001: 2015
Mpanamboatra 10+ taona
Fahafahana avo indrindra sy fiarovana ambony indrindra
Kalitaona avo lenta azo averina 2600mah 3.7V 1 ...
3.6V 6250mAh LG Lithium ion Battery Pack For In ...
Mpiara-miasa manerana ny tany
12V 200AH liFePO4 fonosana bateria ho an'ny fitahirizana angovo azo avy amin'ny masoandro
36V 13AH midina batterie lithium ion Ebike ho an'ny bisikileta ev
11.1V 30Ah Li-Ion 18650 Lithium Ion Li-Ion Battery Pack For Light Street Light
MBOLA TOKONY SOSLLI
maninona no mifidy bateria lithium-ion
Ny simika bateria Lithium-ion dia nanjary simika simika nofidina ho an'ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny fiara herinaratra mankany amin'ny fitahirizana angovo, manomboka amin'ny varotra ka hatramin'ny fampiasana ny fampiharana ara-tafika. Ny tombony azo avy amin'ny chemithies bateria lithium-ion dia misy. · Haingam-pandeha mahery vaika izay mandany fotoana lava eo anelanelan'ny fiampangana · habe miendrika sy lanja maivana · Fotoana trandrahana haingana kokoa · Haingam-pandeha mihazakazaka kokoa ary mitahiry ny mari-pana famandrihana · Fiainana lava fihodinana · Fandehanana maimaimpoana
Serivisy 7/24, Famaliana haingana amin'ny fanontanian'ny mpanjifa ao anatin'ny 12hrs · Vahaolana miavaka sy tokana omena ny mpanjifantsika amin'ny injeniera / mpikaroka matihanina sy mpikaroka matihanina. · Vahao haingana ny olana (24 ora) raha misy tsy mety amin'ny kalitaon'ny vokarintsika. · Ny mpanamboatra bateria lithium lehibe dia nahazo ny ISO9001: 2015, UL, CE, RoHS, UN38.3, MSDS sns. · Ny vokatra rehetra amin'ny bateria SOSLLI dia manarona ny fiantohana ny vokatra amerikan'ny US $ 1.000.000 amin'ny CPIC.
Tombontsoa SOSLLI: (Ampiharo ny rafitry ny kalitao ISO9001)
1. Rafitra famokarana 1600 mpiasa, famatsiana kalitao avo lenta avy any Japon sy Korea Atsimo no mamorona tsipika famokarana mandeha ho azy. 2. Ny kalitao famokarana kalitao 4-Dimensional an'ny famokarana, mpiasan'ny QC 110, 100% ny fisafoana. Ireo mpamatsy ambony 10 orinasa, batterie nahazo CE, RoHS, UL, KC, IEC62133, MSDS, UN38.3, sns 3. OEM / ODM (Flexibly Customizable) 10+ taona niainana, omeo ny mpanjifa miaraka amin'ny alàlan'ny bateria namboarina mba hihaona samy hafa takiana fampiharana. 4. Ny fanavaozana mitohy maharitra 500+ injeniera matihanina, foiben'ny R&D ary foibe fitiliana miaraka amina fikambanan'ny ekipa matanjaka, fitaovana ilaina ary fampiasam-bola be dia be.
Serasera am-pahatsorana, manolo-tena amin'ny zava-bitan'ny mpanjifa sy ny mpiasa. Ny asan'ny ekipa ary mifantoka amin'ny famatsiana ny vokatra sy serivisy bateria Li-ion tsara indrindra.
Ny lanjan'ny orinasa
Manao ny marina sy mazoto, tsara sy mahomby, kalitao sy serivisy, fiaraha-miasa ary fandresena marobe.
Iraka ataon'ny orinasa
Ho tonga teknolojia faran'izay mahay, kalitao tsara, mahomby ary mahomby ary serivisy vaovao iraisam-pirenena orinasa vaovao vaovao angovo!
Miaraka amin'ny PG&E: Tesla hanokatra ny tetikasa fitahirizana angovo lehibe indrindra any Kalifornia
Araka ny tatitry ny fampahalalam-baovao avy any ivelany, nahatratra fiaraha-miasa tamin'ny Pacific Gas Power Company (PG&E) i Tesla, iray amin'ireo orinasan-jiro lehibe indrindra any Etazonia, hamokatra rafitra bateria goavam-be misy herinaratra hatramin'ny 1.1GWh. Electrek dia nitatitra fa ny tetikasa dia ...
Ny teknolojia lehibe sy ny fahatsinjovana ho an'ny rafitra fitehirizana angovo bateria lithium
Vaovao momba ny fitahirizana ny tambajotra Polaris angovo: 2017 Forum Forum amin'ny fampivoarana ny angovo azo avy amin'ny angovo (Beijing) sy ny Seminera ho an'ny fanatanjahantena amin'ny Internet. Ny tolakandro tao amin'ny forum ara-teknika, Jiang Jiuchun, talen'ny National Ener ...
Taona faha-2018: mitantana ny angovo mifangaro amin'ny angovo marobe ao ambanin'ny Internet angovo
Vaovao momba ny fitahirizana ny tambajotra Polaris Energy: azo lazaina fa ny taona 2016 sy 2017 no «vanim-potoana” momba ny Internet angovo. Tamin'izany fotoana izany dia mbola nifanakalo hevitra ny rehetra hoe "inona ny Internet angovo", "fa maninona ny internet angovo", ary "inona ny angovo ...
Shenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd dia naorina tamin'ny taona 2011. Orinasa teknolojia avo lenta mifantoka amin'ny R&D, famokarana sy varotra ny batteran'ny lithium. Manana unitera telo izao izy izao: famokarana sela bateria lithium, fizarana vokatra vita ary ny marika SOSLLI. Ny lehibe p ...
Kolontsaina orinasa SOSLLI
Ny fahitana orinasa dia nitombo ara-pahasalamana i Suo Sili ary lasa orinasa mandroso taonjato maro! Ny Misiantsika dia lasa orinasa vaovao angovo iraisam-pirenena miaraka amin'ny haitao avo lenta, kalitao tsara indrindra, fanavaozana ary fahombiazana ary serivisy kilasy voalohany! lanja fototra Ny fahazotoana, tsy fivadihana, fanavaozana ary fahombiazana, ach ...
Power Battery Pack, Power Lithium Battery Pack, Batterie 20ah Lithium Ion, Ny batterie Lithium herinaratra, Lithium Ion Battery sela, 3.6v Batteran'ny Lithium-Ion,